chakagadzirwa njere (UI, Artificial Intelligence, AI) isayenzi yepakombiyuta inonyanya kugadzirwa kwemichina inoratidza zviratidzo zvekuchenjera. Tsanangudzo ye "maitiro ekuchenjera" achiri chidzidzo chekukurukurirana, chinowanzoshandiswa sechiyero chekuchenjera kuburikidza nefungwa dzevanhu. John McCarthy akauya ku1955 kokutanga.
Kubva mupfungwa zvinhu zvinodzivirira kubata njere mumwe siyana vasiri munhu njere.
Kunzwisisa kweuchenjeri hwepfungwa, kunyanya kuvanhu vose, kunokonzerwa nekushaiwa kwezivo chezvinoita uye zvisingabviri muuchenjeri hwekuvaka, izvo zvinotsigirwa nemafungiro asina kukwana anoshandiswa mu "Science Fiction". Kuti huchenjeri hunofanirwa kuonekwa sechirango, zvinokosha kuti uone miganhu iyi uye kubvisa (dzimwe nguva kunyange magic-kukanda) maonero. Iyi miganhu inogadziriswa nenzvimbo yezvishandiso zvinowanikwa kuuchenjeri hwekuvaka. Kutanga, zvakakosha kutaura kuti chii chinonzi njere. Uchenjeri huripo hunoumba kuvaka uye kushandisa mienzaniso yevanhu (michina) inonzi inonzwisisika. Basa iri rinoumbwa nezvivako zvehuropi hwevanhu, nyika chaiye. Kubvira pakatanga (kubvira pakati pezana remakore re20), kuenzanisira uku kwakatora nzira mbiri:
1. Kuenzanisa kuratidzwa kwekunze kwemabasa evanhu vakangwara
2. Kuenzanisa kwehutano hwehutano hwehupi hwevanhu, ikozvino hutsva hwemashoko
Artificial Intelligence yakasarudza kombiyuta-based computer purogiramu yekuenzanisira (kutevedzera). The kombiyuta kunogona vaisanganisa ne sensors variables (mumuviri, kemikari, utachiona, etc.) Uye actuators (tentacles kufamba zvinoreva - mavhiri, makwara, makumbo, etc.), Uye izvi zvingaita kuti kunzwisisa zano - zvishande robhoti womudenga gororo, motokari pasina mutyairi, etc. Aya makombiyuta anowedzera-awa haana kukosha iye zvino nokuti isu chete tinoda kutarisa mashoko ekugadzirisa zvigadzirwa, iko, purogiramu yeP-computer.
Kuronga mitauro inoita kuti zvikwanise kuvaka purogiramu yemakombiyuta ndeimwe yemitauro yakagadzirirwa. Chinyorwa chinokosha chemitauro iyi ndechokuti tsanangudzo chaiyo yeirimi yavo yose inogadzirwa uye yese yekushanda pamusoro pawo. Icho chimiro chekugadzira chimiro. Zvinonzwisiswa kuti zvisikwa zvisinganzwisisiki zvevanhu, zvepfungwa uye zvekuzvidzivirira, zvinonzi zvinoreva, zvinofanira kubviswa uye kushandurwa nekutsanangurwa zvakajeka. Izvi zvinoitwa Kurambidza (annulling) womukati vagueness, iyo zvasukwa uye yevanhu subjectivity uye emotionality ona vagueness. kupindira iri kunyangarika munhu zvose (vagueness, subjectivity, emotionality) uye mugumisiro nokutorerwa iri dzisinganayi gwenga soulless michina - chakagadzirwa mutauro wevakadzidza (kombiyuta). Zvinorehwa nerimwe mutauro mamiriro (cheni zviratidzo) uye mumwe kushanda zvivako izvi zviri ipapo chaizvo aisa panze (pamwe razero womukati vagueness), kureva kuti zvose ruzivo munhu anoziva pasina mubvunzo kuti dzinorevei. Zvinhu zvakanyatsorondedzerwa zvakajeka zvinoumba boka ratinoti nyika chaiyo. Izvi zvinosanganisira mitauro kombiyuta kwete chete, Turing muchina, asiwo masvomhu, wevakadzidza zvisingarambiki, chaiwo mitambo (wechesi, checkered, makasa, etc.), sayenzi chaiwo. Imwe njodzi yenyika chaiye, inokonzerwa nekurambidzwa kwemukati kusina kunaka, ndeyikuti:
Kurasikirwa kwekusagadzikana kwenguva
Nokuratidza mukati mutsvina kunze kwemuganhu wenyika chaiye, hatina kuratidza mweya wevanhu wekugadziriswa uri kurarama mukufungidzira zvisinganzwisisiki uye mutauro wemanzwiro asiwo kukwanisa kugona kwekufamba-famba kwepfungwa. Nokudaro, isu takarasikirwa nehuwandu hwehuwandu munyika chaiyo. Kurasikirwa kwekuzvitsvaga kwekuzvinyorwa kwezvinyorwa, kusakwanisa kwekuendesa kune nyika inorambidzwa mukati mhenyu, inhanho kubva kumunhu kusvika kumashini akazara; iri nhanho kubva kune vapenyu kusvika kune vasina upenyu mumashoko ekudzidzisa. Semuenzaniso, mumathematics, munhu anofambiswa anofanirwa kutsvaga nzira yekuziva kuti hukama hwemasvomhu hunogona kusarudzwa sei kuwana hukama hunoda (yekupedzisira) hukama. Mumuenzaniso wakajeka, izvi zvinoratidzwa paChinyorwa cheSayenzi peji. Icho chirevo chinoshanda kumabatiro ndezvechokwadi mumutambo wemakadhi kana chess. Zvinoreva makadhi kana chess zvikamu zvinozivikanwa kune munhu anozivikanwa, sezvinoyo mitemo yemutambo. Mutambi (anofambisa) anofanira kushandisa huchenjeri hwake kusarudza marwadzo mukutamba maererano nemitemo. Kana kushambadzika kwemasvomhu kubva kune masvomhu kana yemutambo chaiwo inofanira kurongwa kwekombiyuta, basa remuiti wekutanga rinofanira kurongwa. Munhu anonyora purogiramu anofanira kuronga basa reanjiniya (nyanzvi yemasvomhu kana mutambi) kuitira kuti, mushure mechikamu chimwe nechimwe chechitamba kana kutora, iyo (yakarongwa) inofambiswa inokwanisa kuunza danho rinotevera. Hazvina kukodzera kutsvaga magetsi pamakombiyuta, magetsi ayo haana zvaanoita semashiripiti emakadhi emakadhi, kana mifananidzo pane chessboard, inoshaikwa, inoshaya hupenyu. Hybatelem mune chero mamiriro ezvinhu munhu, mano ake ekuchenjera. Kusiyana nemimwe mishonga inoshandisa kana kugadzirisa mashoma, kombiyuta inogadzira mashoko, asi mutsauko uyu haufaniri kutsausa. Uyewo haafaniri kunyengedza ruzivo kuti purogiramu inogona kugadzirwa nenzira iyo inogona kuchinja pachayo, nokuti pasinei nekuchinja kwose, ichava chikamu chenyika chaiyo uye haigoni kuisiya. Chinhu chinokosha chemakine iyo yakawanda (dzimwe nguva yakarurama, zvisingakwanisi kuwana) zvezvinhu zvakashandurwa (nyaya, ruzivo) uye kushandiswa kwekushandisa kwekunze kwekuita basa iri. Mugadziri wetsvuku mumumigodhi yepamusoro nehuwandu hwemalahle akazara anovhura mikana isingazovepo kana mabasa ayo aifanira kutsigirwa navanhu (zviuru zvevanhu) vane mavara nemafoshoro. Mushandisi ane huwandu hwekushanda (nekukurumidza kwebasa zvichienzaniswa nemurume) anobvumira kugona kwezviitiko, zvisingaitiki zvisingakwanisiki, kana iri dombo rekuchira kana kugadziriswa kwemashoko.
Icho chiri chechigadziro - kombiyuta iyo ine njere yekugadzira inowanikwa yekuenzanisa. Zvinofanira kurangarirwa kuti mutauro zvirongwa (nokudaro kombiyuta) ndezvaJehovha chaiwo nyika vari chaiyo muchina uye exactness asi iri vakakwana kunyorerana kwevanhu psyche pamwe zvichirehwa mutauro zvivako uye mashandiro pamusoro pavo.
Artificial Intelligence inotaurirana maitiro maviri ematambudziko, zvichienderana nokuti ivo vanobatana nenyika chaiyo kana kwete. Avo vasina chokuita nenyika chaiyo, ndivo nyika chaiwo vari semuenzaniso. The chaiwo mutambo (ona chaiwo) kana kwemasvomhu uchapupu (theorem no achiratidza). Iyi ndiyo kuenzanisira kwenyika chaiyo nenyika chaiyo, uye kuenzanisa kunoderedzwa kunyanya kuenzanisira chikonzero. Kunyanya kuzivikanwa ndekufananidzidzira chess expert's moves. Pane zvinhu zvipingamupinyi zvinogona kumiririra kunzwisisa algorithms (ona zvakare notation) Modelling unomutsa uye pamwewo semuenzaniso. Nhamba anofambidzana unhu mukufambisira wechesi, kana zvimwe zvinetso kubata ungwaru yokutevedzera.
Uyezve, mamiriro ezvinhu akaoma nokukurumidza apo zvinetso zvenyika chaiyo zvinotarisirwa. Bhiriji roga roga pakati penyika chaiyo uye chaiyo ndiro chigoni chatinoshevedza (mafungiro emagetsi, ion inotarisana mumhinduro, simba rekujekesa, nezvimwewo). Zvakajairika zviviri nyika idzi, nokuti chaiwo nyika iri chaiyo delineated (pamwe razero womukati vagueness kududzira ravo), kureva, saka kuti munhu wose ari kusango vakadzidza munhu pasina mubvunzo anoziva kukosha kwayo, uye munyika chaiyo iri zvokutanga kuyerwa vachiongorora munyika ino, uye saka wake anoyera anoyera nhengo. Ndiro dombo rekona resainzi chaiyo. Zvinetso zveuchenjeri hwekugadzira hunoenderana nenyika chaiyo inofanira kugoverwa muzvikamu zviviri.
Chokutanga izvi ndechokuti muenzaniso anoshandisa chakagadzirwa njere zivo pamusoro nyika chaiyo inofanira kuva kuitira kuti imwe yakatarwa (default) ruzivo anowana njere mukati runotikurudzira ruzivo yakavigwa, asi zvinogona zvinobva kwavari. Mhando yakadai inonzi inyanzvi. , Zviri kubva muenzaniso uyu anofanira kuva mumwe nyika chaiyo zvakakodzera kuti ruzivo kwave zvakanyorwa rakagadzirwa nevanhu mutauro wevakadzidza (masvomhu, wevakadzidza zvisingarambiki, zvirongwa mutauro), mumwe mutauro pamwe dudziro chaiyo, uye nokudaro haugoni kuva dzinongoitika mutauro pamwe kujeka, mupfungwa uye kuzviitira kududzirwa - zvinoreva. Naizvozvo ruzivo urwu runofanira kuwanikwa kuburikidza nenzira yekutsvaga sayenzi. Zvinofanira kucherechedzwa kuti ruzivo runowanikwa sezvingatarisirwa kujeka, kuzviitira uye mupfungwa dzevanhu ruzivo inoratidzwa dzinongoitika mutauro, havana transferable nezivo chaiwo, chaiwo yakarongwa mutauro kutsanangura ona Vagueness. Kana mitauro maumbirwo rwokuzvarwa mutauro akaiswa munzvimbo chaiyo nyika (masvomhu, wevakadzidza zvisingarambiki, zvirongwa mitauro), tinofanira kurega dzinongoitika yavo, murume wacho basa zvinoreva, nekuti chaiwo nyika haisi chinhu rungadai kukwanisa kuziva, kushandisa, uye muitiro (ndizvo unokwanisa chete pfungwa dzevanhu). Mutauro wakadaro unogadzirwa unogona kushandiswa sechinhu chipi nechipi chezviratidzo, asi pasina tsanangudzo yavo yezvokwadi. Kana kubva mukusaziva, kana zvichida vachifungawo chambotaurwa nezvacho tinogona kupinda imwe nyika chaiyo, pakutanga nokuongorora pakusika chakagadzirwa njere akazviratidza kwakarasika kuedza kushandisa ruzivo anomirirwa dzinongoitika mutauro pacharo kwevanhu ruzivo zvakasikwa.
Chikamu chechipiri chezvinetso zvakabatana nenyika chaiyo ndeye nzira dzepra-psychic iyo huchenjeri hwevanhu, ndiko kuti, hutano hunoitwa nenyika chaiye. azvaiitwa akangosikwa chokuita yomukati kujeka, saka hapana bhiriji chaiyo munyika, nokuti chambotaurwa nezvacho zambuko, riri shanduka, zvinoda kurambidzwa pamusoro pezviri vagueness, uye zviri nyaya vnitropsychických pezvakaitwa yokusafa chikamu. Naizvozvo, hofisi kubata akachenjera, izvo isu asarudzwa pamusoro: Modelling zvimwewo kuratidzwa akangwara basa nevanhu, hazvina kunyange kuedza, Handina zvokushandisa. Zvisinei, rechipiri bazi reuchenjeri hwekugadzira, rinotungamirirwa nekuenzanisira basa rekushandiswa kwemagetsi, rinofanira kuonekwa. Tariro huru dziri kuiswa mukati maro, asi zvakakosha kuziva kuti chiyero ichi chinogona kuunza sei pedyo nehupi hwehuropi hwevanhu, kureva kushandiswa nehumukati hwomukati husina kunaka. Nhoroondo, yekutanga yemasvomhu yemabasa ekutsvaga mutsara yakaratidzwa naWarren McCulloch naWalter Pitts mu1943. Zvinokosha kuti (kwemasvomhu) muenzaniso ndohwaJehovha chaiyo nyika, uye kuti zvose vateveri vavo kuenda nenzira iyi, chepakutanga nyore muenzaniso dzouropi, asi kuti kuva, kuwedzera kunzwisisa siyana (maererano rokusika zvokufungidzira uye nounyanzvi ruzivo munyori) asi zvakadaro sematematical (kombiyuta) muenzaniso, muenzaniso wenyika chaiyo neyakadziviswa mukati mazviri. Ichokwadi kuti zvinyorwa zvisinganzwisisiki zvinoshandiswa muhuropi hwemunhu hazvigoni kurongedzwa nenyika chaiyo, kureva, mutauro wemasvomhu kana kombiyuta. Kunyatsoongorora kwechimiro uye basa re neuron rinoitwa pasi pe electron microscope rinoratidzwa neprof. Stuart Hameroff mubhuku rake. Muna dzouropi kuchitaurwa sechinhu chaizvo kunzwisisa maumbirwo rine yayo kuzvionera maitiro kwakavakirwa kubudiswa yakawanda mashoko, kureva mukusika tsika (njere) unyanzvi pamwe nevamwe Tutsinga tunofambisa mashoko utwu kusarudza. Neuroni yakadaro inenge inenge 100 mabhiriyoni muuropi hwevanhu. Nemhaka yokuti zvisizvo zvisinganzwisisiki zvehutano hwehupi hwevanhu hazvigoni kurongedzwa nenyika chaiyo, zvimwe zvishandiso zvekufananidzira, zvichida zvipenyu, zvinofanira kushandiswa. Vnitropsychické kurongedza wayo yokusafa linkage kuti vnitropsychickou vagueness kwakasiyana zvose kusvika akadzidza pezvakaitwa kuitika munyika chaiyo, semuenzaniso. Physics, kemisitiri, etc. Kana kutsvaka nzira itsva (iyi, kumbomira gwara programmatically akataura chakagadzirwa njere), saka pane kuedza shandisa zviito zvehupombwe huripo, zvakadai semakonzo panzvimbo yekombiyuta yehutano hwemagetsi. Aya maitiro europi ehupenyu ari, kuburikidza nehutano hwakakodzera, hunobatanidzwa mumagetsi (computer) maitiro ekugadzirisa ayo ari chikamu che, semuenzaniso, marobhoti ekuziva.
Mukupfupisa, saka, tinogona kutaura kuti miganhu yeuchenjeri hwekugadzirira inotsanangurwa:
- Kuoma kwezvigadziriswe
- Kune zvinyorwa zvenyika-chaiyo, zvakare inoshandiswa kushandisa ruzivo chete rwakawanikwa kuburikidza neruzivo rwechimiro chesayenzi chaiye, yakanyorwa masvomhu (nehurongwa hwekuita shanduro) inomiririrwa nehukama pakati pehuwandu. Hazvibviri kushandisa shanduko isina ruzivo ruzivo runowanikwa neruzivo rwevanhu rwemunhu, runomiririrwa nemutauro wakajeka, unofunga uye unotenderera. Uyewo hazvigone kushandurirwa mumutauro wemutauro. Sezvo chimiro chechimiro chechimiro chakakwanisa kumira chete ruzivo rwechokwadi rwepasi rwakange rwakawanikwa neruzivo rwechizivo rwesayenzi chaiye, uye ichi chikamu chiduku chiduku chezivo yevanhu, kushanda kweuchenjeri hwekuvaka pane izvi kunopera.
- Inherent zvisizvo zvepfungwa dzepfungwa dzomukati. Hapana chimiro chemutauro chinowanika kutsanangura maitiro, maitiro akajeka ehutano hwehuropi hwevanhu kuitira kuti vagone kuenzaniswa nenyika chaiye - kombiyuta. Saizvozvowo, kunyange mararamiro emasitori akaenzanisirwa nenyika chaiyo haagoni kuva muenzaniso wakaringana zvakakwana wezvokwadi, zvisizvo zvisinganzwisisiki zvinyorwa zvepfungwa dzevanhu munyika chaiyo - uropi hwevanhu.
Inogona nzira yekufambira mberi mberi
Izvo zvisizvo zvisinganzwisisiki zvinyorwa zvepfungwa dzevanhu dzine zvigadziro zvavo zvezvinhu - zvigadzirwa zvehupenyu, zviri pachena pamagumo avo, zvinogona kurondedzerwa nemitemo yemakemikari uye yepanyama. Kana chirevo chekusika chimiro chekushandura nechinangwa chisingazivikanwi chinozivikanwa uye chinogadziriswa, izvi zvinogona kutevedzerwa zvakagadzirwa, zvichida kunyange mune chimwe chimiro kunze kwechirevo chezvinyorwa zvehuropi hwemunhu. Iko kuwanikwa kwemitemo yezvakatipoteredza nekunze kusingapindiki mukati, uye nokudaro kunzwisisa kwehupenyu hwehupenyu mune chinangwa chokudzidzisa.
Related mashoko kunogona kuwanikwa munyaya Turing bvunzo.
In nezvemuenzaniso uyu zvakare ndakafunga Turing bvunzo yakaratidzwa kombiyuta nesayenzi Alan Turing muna 1950 mu nyaya yake "kadambari michina uye noungwaru". Muchidimbu anoti kuti vakangwara michina angati, kana hatigoni kuziva ake mitauro goho kubva mitauro goho vanhu.
Chinese Room nharo iri kazhinji anoonekwa somunhu Vashaya kuna Turing bvunzo. Tichifunga kuti pangava gadzirirwa kuti aigona vatevedzere maitiro zvakangwara akagadzirwa akagadzirira mhinduro kumibvunzo zvose zvinogoneka pasina chinhu mhiri "kufunga".
Iwe unogonawo kuwana ruzivo rwakabatana muNeuron Network.
Related mashoko kunogona kuwanikwa munyaya Genetic Programming.
Related mashoko kunogona kuwanika Article Expert System.
The nyanzvi kwava purogiramu yepakombiyuta ine basa pakupa nyanzvi zano, sarudzo kana kutokurudzira chigadzikiso mumamiriro ezvinhu.
Nyanzvi hurongwa yakagadzirirwa kuitira kuti kubata non-Numeric uye kujeka ruzivo chedzimudzangara mabasa kuti hazvigoni kugadziriswa zvetsika algorithmic dzokuvhiya.
State nzvimbo kutsvaka
Related mashoko kunogona kuwanika Article State nzvimbo kutsvaka.
Kunyanya munyika dzichiri algorithms kuti nekugadzirisa chaiwo mitambo (wechesi, vakadzi), zvinoita sokuti zvakakodzera kutsanangura imwe kuva mamiriro ezvinhu umo tinogona kuwana iri mutambo, zvinogoneka runoita kana kuchinja pakati inoti uye kutanga uye magumo nzvimbo. Tiri kutsvaka ipapo gwara kubva pakutanga kusvikira pakupedzisira inoti, zvinoreva kubudirira kwedu.
Sezvo mamiriro dzezvimwe zvinogona guru (somuenzaniso, enda mutambo), uye mune zvimwe zviitiko kunyange magumo, zvinokosha kusarudza nzira nokuchenjera kugera Migwagwa kukodzera uye kukoshesa nzvimbo.
Related mashoko kunogona kuwanikwa munyaya Data Mining.
Large date rinovira (kazhinji inochengetwa Databases) pamusoro nehurongwa havana kushandisika uye anonzwisisika zvakanaka, kunyange kana ane ruzivo uye mifananidzo nomufambiro kuongororwa maitiro. Mining nzira anomuchinja kuti mashoko mugomba chiine yakajeka siyana kutsanangura maitiro kuti zvikuru zvinoshanda.
Mupfungwa yakakura, kwete chete zvepakutanga kubudiswa Data (nhamba, hungiso, categorical Data), asiwo kubudiswa inzwi, mifananidzo (digitaalinen mufananidzo kugadzira) Video, rurimi rwemutauro (ona mutauro wekushandura mutauro, corpus) uye bioinformatics (bioinformatics).
Outputs dzakasiyana kuti mabasa akasiyana, uye inobvawo pane zvatinoda kuva uye chii (uye zvakanaka sei) tinogona dredge kumusoro.
Mashoko akafanana anokwanisawo kuwanikwa muKunamata Kudzidzira.
1979 gore, runopfuura kombiyuta nyika shasha iri yemhuka backgammon.
Mutambo wekutya chechesi yakange iri nyaya yekuongorora kubvira pakutanga kwekombiyuta yesayenzi. Mhinduro yechinetso ichive ichibatanidzwa neuchenjeri kubva pakutanga, asi kukunda hazvirevi kureva kungwara kukuru. 1997 yakakunda Deep Blue kubva kuBM, mutambi wenyika yose Garri Kasparov. Deep Blue, zvisinei, yakanga yakasvibiswa system ne computational accelerators. Yaiva yakawanda pamusoro pesimba rakashata. Iye zvino AI haisisiri kubudirira zvakadaro, asi inobudirira zvikuru.
Chinook ane purogiramu mitambo Chirungu mudzimai, ane creators muna July 2007 akataura kuti havagoni kurasikirwa. Kwemakore anoverengeka vasati kugara yandaurayira vavengi dzevanhu. mugumisiro uyu nokuramba ibatanidzo ndakafanana simba apo kushanda pakuvheneka zvinzvimbo pakati mutambo uye yakanaka Database uye kanda zviteshi.
Mapurogiramu Computer kakawanda kufamba achitamba saka zvakanaka hazvina. Izvi zviri pachena nokuti Goban (enda mungarava) rakanyatsojeka rakakura nevamwe ibwe rimwe nhema kunowedzera kunzwisisa zvisarudzo, zvisinei, izvo, vanhu vane mukana kubata kwavo chokuziva kukwanisa kuziva zvitarisiko. Asi zvakanaka mapurogiramu kuposha mhinduro ndakafanana simba (muti kupfuura kutsvaka) uye kunzwisisa vanokwanisa akundwe (2016) uye vanatenzi.
Air Combat AI Arufa zvinogona mhepo kurwisana kupfuura vezvikepe dzevanhu.
Mamwe mabasa nokuti njere miedzo AI anokwanisa kubata zviri nani pane vanhu vakawanda.
AI zvakare anokwanisa kubata girazi bvunzo.
AI anokwanisa kuona ngozi kukundikana mwoyo kupfuura chiremba.
AI zvinoita nyore kutevedzera manzwi evanhu.
Dambudziko nderokuti AI anoita sebhokisi dema. Munhu anofanira kutenda zvisinganzwisisiki zvigumisiro zvinogona kuva zviri nani (ane njere) kupfuura iye, nokuti havanzwisisi. Inonzi mushure mekutsanangura AI (XAI).
AI inogona kubvisa kukanganisika kwevanhu. Kunyange zvakadaro, zvingave zvichitaurira kukanganisa kwayo. Pfungwa dzevanhu uye dzekufunga dzinogona kunyengerwa.
Mishonga inonzwisisika inyaya inofadza yevanyori vanyengeri vanyori. Isaac Asimov akazvipira zvizhinji zvebasa rake remashoko kumashoko ekudzidzira arobhoti, nhau yake pfupi I, Robot, pamwe nenyaya yeThe Half-Man, yakashambadzirwa.
Munyori wePoland, Stanisław Lem, akataura nezvehuzivi hwehuchenjeri hwehutsinye mumabhuku ake Cyberdia uye Solaris (iyo yakave zvakare yakabudiswa, kunyange kaviri). Zvimwe zvezvinhu zvemichina zvemagetsi zvakakurukurwa zvakare muGolem XIV.
Zvechokwadi, zvakawanda zvezvinyorwa zvemaitiro zvino zve cyberpunk scifi zvakabatanidzwa zvakananga nekupinda kwevanhu nemichina, kuitira kuti vararame nepfungwa yemakanisi akachenjera. Semuenzaniso, ngatitaure Neuromancer William Gibson.
Vaya vari pakati pevateereri vemafirimu vemazuva ekutanga kwezana remakore vakawanda vakavhiringidzwa neTrix matric, iyo inotaura nezve nyika inotungamirirwa neuchenjeri hwekugadzira pakutanga hwakasikwa nevanhu. Pakati pemabasa akare akwegura ndeye Terminator kana Blade Runner.